NMB Technologies Corp. ဖြန့်ဖြူး - Micro-Semiconductor.com
- NMB Technologies ကကော်ပိုရေးရှင်းက၎င်း၏မိဘကုမ္ပဏီ, Minebea Co. , Ltd များအတွက်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလက်မောင်းအဖြစ်စက်တင်ဘာလ 1968 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ Novi, မစ်ရှီဂန်အတွက်ရုံးချုပ် NMB Technologies ကကော်ပိုရေးရှင်း
ရှေ့ဦးစွာ မှစ. , NMB ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့မိတ်ဖက်ဖန်တီးခြင်းအတွက်ဟုယုံကြည်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဒါကကတိကဝတ်ရရှိနိုင်ဒေသခံလျှောက်လွှာအင်ဂျင်နီယာများ, တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့တိုက်ရိုက်ရောင်းချမှု, အောင်နှင့်ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမီဖြန့်ဖြူးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ထွက်အတွင်း၌၎င်း၏အရည်အသွေးကိုသိသူဒေသခံကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပူးပေါင်း. ခြင်းဖြင့်သရုပ်ပြနေသည်။
ကုမ္ပဏီများ၏ Minebea Group ၏တစိတ်တပိုင်းအဖြစ်, NMB Technologies Corporation ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏လက်၌ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်ထုတ်လုပ်မှုအင်အားကြီးနေရာ။ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများထိုင်း, ကမ္ဘောဒီးယား, တရုတ်, စင်ကာပူ, ဂျပန်, ဥရောပနှင့်မြောက်အမေရိက၌၎င်း, ကမ္ဘာကြီးကိုကျယ်ပြန့်အသုံးချ 60,000 လူမျိုးကိုစိုးတည်ရှိသည်နှင့်အတူ, ကုမ္ပဏီများရဲ့ NMB / Minebea Group မှလျှပ်စစ်၏ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေဆဲ -mechanical အစိတ်အပိုင်းများကို။
NMB မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတိကဝတ်အဆိုပါထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်, drive ကိုကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်မှုကိုကာကွယ်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုနှိုးဆော်ခြင်းများနှင့်အမြင့်ဆုံးစံဖို့ရညျအသှေးကိုင်ထားပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတွေအတွက်အရည်အသွေး, ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အရည်အသွေး, နှင့်အရည်အသွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလတန်းကျောင်းအစိတ်အပိုင်းဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
ဖေါ်ပြချက်: FAN IMPELLER 175X69MM 48V
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 496 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: STEPPER MOTOR HYBRID BIPOLAR 24V
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2021 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 4208 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN AXIAL 80X25MM 115VAC WIRE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 4925 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2037 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN AXIAL 92X38.4MM 24VDC WIRE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 5416 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN BLOWER 51X25MM 12VDC WIRE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 11575 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN AXIAL 172X38MM 115VAC TERM
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2356 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 4776 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN AXIAL 80X25.5MM 12VDC WIRE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 4915 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN 5VDC 40X20MM 2WR
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 14067 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN AXIAL 80X15MM 24VDC WIRE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 13753 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN AXIAL 119X38.4MM 48VDC WIRE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 6287 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 17308 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN AXIAL 50X10MM BALL 5VDC WIRE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 12989 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN AXIAL 92X25MM 12VDC WIRE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 12429 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 4343 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN AXIAL 119X38MM 240VAC TERM
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 1663 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN AXIAL 92X25.5MM 12VDC WIRE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 4475 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN AXIAL 80X38MM 230VAC WIRE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 9356 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN AXIAL 120X38MM 24VDC WIRE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 5735 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN AXIAL 119X38.4MM 12VDC WIRE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 7354 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: STANDARD MOTOR BRUSHLESS3PHASE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 619 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN 24VDC 60X20MM 3WR
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 14783 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 10658 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN AXIAL 60X30MM 115VAC WIRE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 8228 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN AXIAL 172X38MM 230VAC TERM
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2025 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 6909 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN AXIAL 92X25.5MM 24VDC WIRE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 5487 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN AXIAL 119X38.4MM 24VDC WIRE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 5789 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN AXIAL 92X38.4MM 12VDC WIRE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 5673 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 1745 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: STANDARD MOTOR 13800 RPM 18VDC
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 533 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: STEP MOTOR HYBRID UNIPOLAR 24V
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 1667 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 7251 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 15280 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN AXIAL 92X38.4MM 48VDC WIRE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 4773 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 4421 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: STANDARD MOTOR 6073 RPM 12VDC
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2451 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN AXIAL 30X10MM 12VDC WIRE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 11461 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 4859 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN AXIAL 172X50.8MM 12VDC WIRE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 4816 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 10073 pcs RFQ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 5797 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN AXIAL 119X38MM 115VAC TERM
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 9435 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN AXIAL 92X25MM 115VAC TERM
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 8183 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN AXIAL 60X25MM 24VDC WIRE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 16726 pcs RFQ
ဖေါ်ပြချက်: FAN AXIAL 172X25.4MM 24VDC WIRE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 1747 pcs RFQ